Makarenda 5 iri Yemahara App yevhiki paApp Store | IPhone nhau
Zvinotaridza kuti vakomana vanobva kuCupertino vaisa mabhatiri kana zvasvika pakupa mahara maapplication muFree Application yeiyo Svondo chikamu. Vhiki rapera mutambo wakasarudzwa waive Space Marshal, wechitatu-munhu FPS mutambo uyo usina avo vanofara mukati me-app kutenga izvo pakupedzisira zvinogara zvichikanganisa ruzivo rwekutamba rwevashandisi.
Kunge svondo rapfuura, Apple yakasarudza, panguva ino iko kushanda, Makarenda 5, imwe yeakanakisa mashandisirwo ekugadzirisa khalendari yedu nemabasa zvakananga kubva ku iPhone yedu nePadad. Ichi chishandiso chine mutengo wenguva dzose muApp Store ye6,99 euros.
Kusiyana nezvimwe zvinoshandiswa apo iyo iPad vhezheni inowanikwa zvakasununguka uye iwe unofanirwa kubhadhara kuti uishandise, Makarenda 5 ndeyekushandisa kwese, uko kunotibvumiragadzirisa edu ese mabasa uye makarenda kugadzwa nekutenda kune inonakidza interface izvo zvinotipa isu, izvo zvinoshandura mukuita kusiri nyore kupfava pakuronga edu emangwana mabasa uye zviitiko. Zvakare, kana tikashandisa Google Calendar, kana tangoisa application pane yedu kifaa, iko kunyorera kunotipa sarudzo yekushandisa Google makarenda.
Makarenda 5 makuru maficha
Chiitiko-chakatarisana chinongedzo. Yayo yakanakisa interface inoita kuti zvive nyore kwazvo kuona iwo mabasa uye mapikicha atakamirira, pasina zvishongo zvinogona kutikanganisa kubva kune izvo zvinonyanya kukosha.
Zuva, vhiki, mwedzi uye chiitiko runyorwa modhi. Kana tichida tarisa zviitiko zvedu serondedzero Panzvimbo pechinyakare maonero anoshandiswa neese makarenda, Makarenda 5 anotiratidza zviitiko zvedu zvakamirira sekunge irwo runyorwa.
Gadzira smart zviitiko. Kana Muvhuro wega wega isu takamirira kuona chitsauko chekupedzisira cheThe Walking Dead, tinogona kunyora mukarenda "Chikamu chitsva cheThe Walking Dead neMuvhuro" uye nenzira iyi chikumbiro chinotibvunza kana isu tichida kunongedza chiitiko chinowanzoitika Muvhuro wega wega pakarenda yedu.
Pamusoro pekukwanisa kugadzira zviitiko zvakaringana, Makarenda 5 anotibvumidza kudhonza zviitiko kana mabasa atakatangisa kune mamwe mazuva pane kuti tiite gadzirisa iyo kugadzirisa iyo nyowani date.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Makarenda 5 ndeye Mahara App yevhiki paApp Store